Faa'iidooyin noocee ah ayaan arki doonaa haddii aan iibsado Macaamiisha YouTube?
Waxay ku siineysaa kalsoonidaada kanaalkaaga ee koritaanka dabiiciga ah.
Waxay ku dhiirigelisaa kuwa kale inay ku biiraan saldhigga rukunka.
Xawaaraha gaarsiinta: Macaamiisha 10-100 maalin kasta.
Natiijooyinka waxay bilaabmaan saacadaha 24-72.
Natiijooyinka ayaa sii soconaya maalin kasta ilaa inta ka sarreysa 100% la dhammaystirayo.
Tirinta Macaamiilku waa inay ahaataa mid dadweyne inta lagu guda jiro keenista.
Waa maxay sababta aad ugu baahan tahay inaad iibsato macaamiisha YouTube si aad u ogaatid.
Waxaan hadda ku nool nahay adduunyo ay telefishanka ku dhowaad u beddeleen fiidiyowyo onlayn ah. Waxaad caan ka noqon kartaa hal fiidiyow oo lagu soo galiyay YouTube. Caqabadaha ugu waaweyn ee aan wajahayno markaan furano kanaalka YouTube-ka ayaa kala ah; sida loo helo macaamiisha, jeclaanta, aragtida, faallooyinka iyo hawlgallada kanaalkayaga. Safarka kumanaan mayl wuxuu ku bilaaban karaa hal talaabo oo hal talaabo ay tahay inaad iibsato macaamiisha YouTube-ka ee kanaalkaaga. Maxaan ugu Baahanahay Inaan Iibsado Macaamiisha YouTube? YouTube waxaa loo yaqaanaa mid kamid ah qaababka ugu fudud uguna wanaagsan ee aad ku suuqgeyn karto naftaada ama kartidaada. Qaybta ugu fudud ee YouTube-ka ayaa ah soo gelinta fiidiyowga, laakiin howsha ugu weyn ayaa ah in dadku ay daawadaan oo haddii ay jecel yihiin, ay ku tiirsanaadaan kanaalkaaga kadib. Marka dadku ay daawadaan kaliya fiidiyowgaaga, waxay la micno tahay inay jecel yihiin fiidiyowgaas gaarka ah, laakiin markii ay iska diiwaan geliyaan kanaalkaaga, waxay muujineysaa inay dareemayaan in fiidiyowyadaada ay mudan yihiin daawashada. Macaamiil waa qof raacaya kanaalkaaga. Haddaba bal aan eegno faa'iidooyinka iibsashada macaamiisha YouTube-ka ee kanaalkaaga:
Caannimada Channel: Uma maleyneyso in macaamiillayaashu ay bilaabi doonaan inay daadiyaan marinkaaga marba markii aad abuurto. Markaad iibsanayso macaamiisha YouTube, liiska macaamiishaada ayaa bilaabaya inay kordhaan. Tani waxay siin doontaa daawadayaasha kale fahanka in kanaalkaagu uu caan yahay oo mudan yahay in la daawado iyo / ama loo rukumo.
Helitaanka Macaamiisha: Waa wax caadi ah in dadku ay eegaan tirinta macaamiishaada oo ay go'aan ka gaaraan tayada / qiimaha fiidiyahaaga. Markaad haysato tiro macaamiil ah waxay u sheegtaa in kanalkaagu caan yahay oo ay macquul tahay sababtoo ah fiidiyowyadaada ayaa mudan in la daawado. Markii aad sii kordho macaamiisha aad haysato, ayay u badan tahay dadka inay fursad u siinayaan kanaalkaaga oo ay fiirin doonaan fiidiyowyadaada. Adoo u malaynaya inaad haysato waxyaabo fiican, waxay u badan tahay inaad ka hesho macmiil dabiici ah daawadayaasha cusub ee dabiiciga ah.
Caddeynta Bulshada: Fikradda aasaaska ah ee ka dambaysa fikirkaan nafsi ahaaneed waa “waxaad u badan tahay inaad wax qabato markii aad aragto dad aad u tiro badan oo isku wax sameynaya.” Fikrad isku mid ah ayaa lagu dabaqayaa YouTube. Markaad aragto kanaal ay ku qoran yihiin tiro macaamiil aad u tiro badan, waxay kaa qaadaysaa dareenkaaga. Waxaad jeclaan lahayd inaad wax ka ogaato waxa ku kalifay in dadbadan ay iska diiwaan geliyaan kanaalkaas oo ay u badan tahay inaad iskaa iska dhigto.
Saamaynta Bandwagon: Tani waxay aad ugu egtahay caddaynta bulshada laakiin waxay la timaadaa qallooc. Markuu qof booqdo kanaalkaaga oo uu arko tiro yar oo macaamiisha ah, waxay ka niyad jabeen inay rabaan inay daawadaan fiidiyowgaaga ama iska diiwaangeliyaan. Haddii aad ku kicisay kanaalkaaga kumanaan macaamiil ah, markaa isla dadkaas ayaa aad uqurux badan oo u badan inay daawadaan fiidiyowgaaga, sida, faallooyinka oo rukumayso kanaalkaaga.
Helitaanka kumanaankaaga kun ee ugu horreeya ee YouTube-ka ah waa waxyaalaha ugu adag ee aad la kulmi karto kanaalkaaga cusub. Kulligeen hal mar ayaan soo marinay kanaalo maxaa yeelay waxaa ku yaraa ama aan lahayn macmiil. Waqtigaaga badbaadi oo koontadaada dhulka ka dhig adigoo iibsanaya qaybtii ugu horreysay ee macaamiisha YouTube.
Maxay dad badani u iibsadaan macaamiisha YouTube-ka?
Inta badan macaamiisheenu waxay iibsadaan macaamiisha maxaa yeelay waxay siinaysaa kanaalkooda kalsooni deg deg ah, taas oo u oggolaanaysa iyaga inay bilaabaan inay ku koraan xawaare ka dhakhso badan, dabiici ahaan. Tusaale ahaan, marka daawade xiisaha lihi uu daawado mid ka mid ah fiidiyowyadaada oo uu ku raaxeysto, laakiin uu arko inaad haysato tiro yar oo macaamiil ah, fursadaha ay ugu biiri karaan kanaalkaaga ayaa aad u yar. Si kastaba ha noqotee, haddii isla qofkaasi uu arko fiidiyowgaaga oo uu arko inaad haysato tiro aad u tiro badan oo macaamiil ah, fursadaha ay iyaga iska diiwaangelinayaan sidoo kale aad ayey uga weyn yihiin. Dadka intiisa badani waxay isweydiiyaan, "Haddii aysan jirin cid kale oo iska diiwaangelisa kanaalkan, maxaan u doonayaa?". Maskaxdan awgeed, waa muhiim in la helo tiro badan oo macaamiil ah si aad u bilowdo inaad si dabiici ah u kobciso kanaalkaaga.
Waxaan rabaa in ka badan macaamiisha 10,000. Ma dhiibi kartaa waxbadan?
Haa, waxaan bixin karnaa in kabadan 10,000 oo macaamiil ah! Waxaan bixinaa 10,000 oo macaamiil ah inta ugu badan ee qof uu ka iibsan karo boggan sababo kala duwan awgood, laakiin midkoodna lama xiriiro awooddeena aan ku gaarsiin karno. Haddii aad rabto macaamiisha 100,000 ama xitaa 1 milyan, waan geyn karnaa, laakiin waa qaali. Haddii aad rabto inaad iibsato 10,000+ macaamiisha, fadlan nala soo xiriir oo cadee tirada aad xiiseyneyso inaad iibsato.
Muddo intee le'eg ayay qaadataa in la helo amarkayga?
Markaad naga iibsato macaamiisha YouTube, natiijooyinka waxay sida caadiga ah bilaabaan inay ka soo muuqdaan kanaalkaaga 24-72 saacadood ka dib amarkaaga la dhigo ka dibna natiijooyinka ayaa sii socda maalin kasta. Waxaan ku bixinnaa xawaare kudhowaad 10 illaa 100 macaamiil maalinle ah. Natiijo ahaan, haddii aad dalbato 500 oo macaamiil ah, waxaad filan kartaa inay qaadato illaa 72 saacadood si loo bilaabo ka dibna 7 ama maalmo ka badan si buuxda loo geeyo. Inta badan macaamiisha aad iibsato, waxay sii qaadan doontaa inay ku bixiso amarkaaga oo buuxa.
10 Faallooyin ($ 20) 20 Faallooyin ($ 35) 30 Faallooyin ($ 50) 50 Faallooyin ($ 80) 100 Faallooyin ($ 140)